Gwa m okwu na TokBox | Martech Zone
Monday, May 17, 2010 Tuesday, October 4, 2011 Bọọlụ Lorraine
Abụ m geek ahịa, ya mere enwere m obi ụtọ mgbe teknụzụ ọhụụ bịara nwere ike inyere ndị ahịa m aka. M na-eji ọtụtụ awa ịdenye aha, na-anwale ọrụ ọhụrụ. Echere m Uzoamaka nwere ike ịbụ ihe kachasị amasị m.
Onye ọka iwu m mere ka m mata ọrụ a. (Ee enwerem onye ọka iwu, na nke ka mma, ọ bụ onye ọka iwu ọgbara ọhụrụ). Ezitere m ya nkwekọrịta iji nyochaa, ma kama izighachi m akwụkwọ ogologo 2 - 3, nke m na-agaghị agụ n'ụzọ ọ bụla, o zitere m vidiyo a. Na-agwa Matt okwu, ọ kwenyere na ya agaghị eji ngwa ọrụ a na ndị ahịa ọ bụla. Fọdụ ndị ahịa ga-ahọrọ, ma ọ bụ chọọ akwụkwọ edere ede, mana maka ndị na-emeghị nke a bụ ngwa ngwa, ụzọ dị mma iji kwurịta okwu.
Site na nnyefe ọrụ, ịdekọ vidiyo dị ọsọ ọsọ, wee dee ma ọ bụ chere maka odeakwụkwọ iji pịnye nzaghachi ka m wee nweta azịza m n'ụdị masịrị m, Matt nwekwara ike ịga n'ihu onye ahịa ya ọzọ.
TokBox nwere ọtụtụ atụmatụ nke masịrị m:
Ọ bụ n'efu - Ee enwere nkwalite na njirimara dị elu maka ego, mana ngwugwu bụ isi zuru oke
Enwere m ike ịza vidiyo, olu, email ma ọ bụ oku ekwentị niile site na otu ihuenyo ahụ
A na-enwe atụmatụ nkata olu na vidiyo na ọnụahịa ezi uche dị na ya: $ 9.99 / ọnwa maka obere nkata. $ 18.99 maka nkata metụtara ihe karịrị mmadụ 200. Nke a bụ ọnụ ahịa dị irè maka webinars
Gini mere obi ji ato m uto banyere nke a?
Abụ m onye na-ekwu okwu, ọ bụghị onye edemede, yabụ nke a mara mma n'anya m dịka ụzọ isi agwa ndị ahịa na ndị ahịa ihe.
Ana m atụ anya itinye vidiyo dị ka akụkụ nke mkpọsa mkpọpu mmiri anyị dị ugbu a, ebe anyị ga-agbanwe, vidiyo, ọdịyo na ozi email
Njirimara onye ọrụ ahụ dị nnọọ mfe maka ndị mgbasa ozi na ndị ahịa ha. Enwetara m ozi email dị mfe, pịa njikọ njikọ ahụ na mmemme ahụ. Ọ chọrọ Ọ dịghị ọkachamara na ọtụtụ ndị ahịa m, enweghị nka dị oke egwu.
Kedu ihe ị ga - eme TokBox? Echere m na azịza ya dabere n'echiche gị. Ọ bụrụ n'iji ya, ọ ga-amasị m ịhụ ụdị nke ihe ị na-eme!
Tags: njikọchọọ na mmekọrịta mmadụ na ibe yaWriting